Reward တန်ဖိုးနှင့်အန္တရာယ်အတွက် Dopamine အချက်ပြအခြေခံနှင့်လတ်တလောဒေတာများ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
ဆုကြေး Value ကိုနှင့်အန္တရာယ်အခြေခံပညာနှင့်လတ်တလောဒေတာများ (2010) အတွက် Dopamine နေရင်မြန်အောင်
Wolfram Schultz 1
ပြုမူနေဦးနှောက် Funct ။ 2010; 6: 24 ။
2010 ဧပြီလ 23 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1186 / 1744-9081-6-24 ။
FULL ဆန်းစစ်ချက်: Dopamine ဆုကြေး Value ကိုနှင့်အန္တရာယ်အခြေခံပညာများအတွက်နေရင်မြန်အောင်နှင့်လတ်တလောဒေတာများ
ဇီဝကမ္မဗေဒ, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ, ကင်းဘရစ်, ဒေါင်းနင်းလမ်း၏တက္ကသိုလ်, ကိန်းဘရစ် CB1 2DY, ဗြိတိန်၏ 3Department
Wolfram Schultz: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ယခင်တွေ့ရှိရပါသည်, လျှပ်စစ် Self-stimulation နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလေ့လာမှုများ midbrain dopamine စနစ်များကိုဦးနှောက်၏အကျိုးကိုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှ dopamine အာရုံခံ၏အခြေခံအချက်ပြအကြောင်းကိုတစ်ဦး updated ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်။
အဆိုပါဖော်ပြထားစမ်းသပ်ချက်တိကျတဲ့အမူအကျင့်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းနိုးမျောက်တွေကိုတစ်ခုတည်း dopamine အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့စံအမူအကျင့်များနှင့် neurophysiological နည်းလမ်းများအသုံးပြုခဲ့သည်။
Dopamine အာရုံခံပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုမှ phasic Active ကိုပြ။ အဆိုပါ signal ကိုတုံ့ပြန်အာရုံခံ၏အပိုင်းအစ၏အမိန့်ဆင်းအတွက်ဆုလာဘ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ salience, အန္တရာယ်နှင့်ပြစ်ဒဏ်ထင်ဟပ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုစီးပွားရေးရွေးချယ်မှုများအတွက် key ကိုဆုံးဖြတ်ချက် variable ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှု codes တွေကိုဆုလာဘ်တန်ဖိုးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်၎င်းတို့၏ချုပ်ဖော်ပြထုတ်ကုန်, မျှော်မှန်းထားသည်တန်ဖိုး။ အဆိုပါအာရုံခံကုဒ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုကြောင့်အရှင်သီအိုရီသင်ယူခြင်းအားဖြင့် postulated တစ် bidirectional ခန့်မှန်းအမှားသင်ကြားမှု signal ကိုများအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း, ခန့်မှန်းခြင်းမှမတူအဖြစ်။ ဤသည်တုံ့ပြန်မှုစံသွေဖည်၏ယူနစ်ခဲ့သည်ဆို၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အတော်လေးအနည်းငယ် dopamine အာရုံခံယေဘုယျအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် arousal ဖို့ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု၏ဆက်ဆံရေးမရှိခြင်းအကြံပြုခြင်း, ပြစ်ဒဏ်နှင့်အေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှုအောက်ပါ phasic activation ပြသပါ။ dopamine အာရုံခံ၏ကြီးမားသောအချိုးအစားမှာလည်းပြင်းထန်သော, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated နေကြသည်။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုဝတ္ထုဖြစ်သည့်အခါဤသည်တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်လျက်ရှိ၏ ကဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို signal ကိုထံမှကွဲပြားဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Dopamine အာရုံခံဖြစ်နိုင်သည်မူလတန်းဆုလာဘ်များကအလားတူလှုံ့ဆော်မှုနှင့် pseudoconditioning နေဖြင့် General ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း Non-ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုဖို့လည်း unspecific Active ကိုပြ။ ဤရွေ့ကား Active ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုထက်တိုတောင်းဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏလှုပ်ရှားမှုစိတ်ကျရောဂါအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။ တစ်ဦးကသီးခြား, နှေးကွေး dopamine signal ကိုစွန့်စားမှု, အခြားအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက် variable ကိုအကြောင်းကိုအကြောင်းကြား။ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်အမှားတုန့်ပြန်မှသာဆုလာဘ်နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်; ကဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်တွေရဲ့အန္တရာယ်အားဖြင့်ပြခဲ့သည်ဆို၏ဖြစ်ပါတယ်။
Neurophysiological လေ့လာမှုများအများစုနှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ကြောင်း phasic dopamine အချက်ပြမှုများကိုထုတ်ဖေါ်သော်လည်းမသီးသန့်ဆုချရန်။ လုံးဝတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း, dopamine signal ကိုရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အများဆုံးကိုအခြားဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုထက်ပိုမိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကျပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် psychopharmacological လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရလဒ်များ midbrain dopamine စနစ်များအဘို့အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကျယ်ပြန့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သော့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုတက်ကြွစွာလျင်မြန်စွာအာရုံခံယန္တရားများနှင့်အတူလိုက်ဖက်မယ့် phasic dopamine signal ကိုအားဖြင့် encoded ကြသည်, ဤများစွာသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြစ်သောပါသလဲ ကောင်းသောအရိပ်အမြွက် dopamine လှုပ်ရှားမှုသက်ရောက်မှု [1,2] ထုတ်လုပ်ကြိုးများနှင့်ချဉ်းကပ်မှုရှိကြောင်းအကြံပြု, မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်လျှပ်စစ် Self-stimulation မှလာကြ၏။
ကျွန်တော်တို့သည်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူ generate ကြောင့်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်ဆုလာဘ်သတ်မှတ်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူသင်ယူမှုထုတ်လုပ်ရန်, စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ရလဒ်များကိုယ်စားပြုအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့် hedonic ခံစားချက်တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ဆုလာဘ် individal နှင့်မျိုးဗီဇရှင်သန်မှုများအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြပြီးယင်းကဲ့သို့သောက်သုံးရေ, စားခြင်းနှင့်မျိုးပွားအဖြစ်မူလတန်းဖြစ်စဉ်များကိုထောကျပံ့။ ဒီအမူအကျင့်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပိုက်ဆံ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ artefacts, ဗေဒလှုံ့ဆော်မှု attribute တွေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအပါအဝင်အချို့သော nonalimentary နှင့် nonsexual အဖွဲ့အစည်းများထံလည်းဆုလာဘ် function ကို attributes ။ ဆုလာဘ်များစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အပေါ် forage နှင့်ကုန်သွယ်ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားအပြုအမူတွေအတွက်အေးဂျင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။
ဆုလာဘ်များသည်တိကျသောပမာဏနှင့်တိကျသောဖြစ်နိုင်ခြေများရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များသည်အဘယ်သူ၏တန်ဖိုးများကိုရွေးချယ်မှုအရာဝတ္ထု၏ကြင်နာနှင့်၎င်း၏ပမာဏနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများကဆုံးဖြတ်ကြသည်ရွေးချယ်မှုများအကြားရွေးချယ်မှုပိုကောင်းအောင်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်များကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးများဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ စံပြကမ္ဘာတွင်ဤဖြန့်ဝေမှုများသည် Gaussian လုပ်ဆောင်မှုကိုလိုက်နာသည်။ အစွန်းရောက်အကျိုးကျေးဇူးများမှာအလယ်အလတ်ရလဒ်များထက်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုများသောအားဖြင့် binary ဖြစ်နိုင်ချေဖြန့်ဝေခြင်းကို equiprobable values ​​(p =3တွင်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုစီ) ကိုအသုံးပြုသည်။ Gaussian နှင့် binary ဖြစ်နိုင်ချေဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုသင်္ချာဆိုင်ရာမျှော်မှန်းတန်ဖိုး (ဖြစ်နိုင်ချေဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ပထမအခိုက်) နှင့်ယုတ်မှတန်ဖိုးများ၏ပျံ့နှံ့ခြင်းသို့မဟုတ်သွေဖီခြင်းများအားဖြင့်အပြည့်အဝဖော်ပြထားသည်။ ကှဲလှဲ၏) ။ ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်စံသွေဖည်မှုတို့ကိုမကြာခဏစွန့်စားမှုတိုင်းတာမှုများအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးတွင် 'စွန့်စားမှု' ဟူသောဝေါဟာရကိုဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဖြူးမှုဟုလူသိများသောမသေချာမရေရာမှုပုံစံကိုရည်ညွှန်းသည်။ စွန့်စားမှုဆိုသည်မှာရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောသာမန်အသိစိတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းထက်အနိုင်ရခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ဟောကိန်းများရလဒ်များမသိသောအခါဖြစ်ပေါ်ကြောင်းခန့်မှန်းရန်ဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, ရရှိနိုင်ရွေးချယ်မှု options များအကြောင်းကိုကြိုတင်သတင်းအချက်အလက်ပေးခွငျးအားဖွငျ့အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်မချဘို့အခြေခံအရေးပါမှု၏ဖြစ်ကြသည်။ ဆုလာဘ်တန်ဖိုးဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် quantified နိုင်ပါတယ်အဖြစ်, ဆုလာဘ်ဟောကိန်းများမျှော်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် (မျှော်မှန်း) ကှဲလှဲဒါမှမဟုတ်ဖြန့်ဖြူးစံသွေဖည်သတ်မှတ်။
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖိအားသတင်းအချက်အလက်များ၏စွမ်းအင်ထိရောက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှာ။ တဦးတည်းအလားအလာဖြေရှင်းချက်ပိုမိုမြင့်မားဦးနှောက်စင်တာများအတွက်အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးခန့်မှန်းချက်တွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်နိမ့်ဦးနှောက်ကိုအသစ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သိုလှောင်ထားခန့်မှန်းအကြားခြားနားချက်စင်တာအတွက်တွက်ချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်နှင့်၎င်း၏ခန့်မှန်းချက်အကြားကွာဟမှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုခန့်မှန်းအမှားဟုခေါ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဦးနှောက်စင်တာများအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုတက် Keeping ရိုးရှင်းစွာ  င်နည်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဟောကိန်းများကို update ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်လျော့နည်းစွမ်းအင်စားသုံး, ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများထက်အပြည့်အဝရံသတင်းအချက်အလက်တဦးတည်းနည်းနည်းအရာပြောင်းလဲသွားပြီအခါတိုင်း processing လိမ့်မယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်အဆင့်မြင့်ဦးနှောက်စင်တာများတစ်အများကြီးနိမ့်စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်မှာသဘောထားအမြင်, ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတွေအတွက်ပြင်ပကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုအပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ခန့်မှန်းချက်၏ဤအခြေခံပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု updated ဟောကိန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အဖြစ်, သင်ယူခြင်း၏ observable ဖြစ်ရပ်ဆန်းစေပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုသီအိုရီနှင့်အကျိုးရှိစွာယာယီခြားနားချက်အားဖြည့်ခြင်းပုံစံများသည် Pavlovian နှင့် operant အေးစက်မှုအတွက်ရလဒ်ခန့်မှန်းချက်အမှားများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုဖော်ပြသည်။ လက်ရှိအမြင်များသည် Pavlovian ၏သင်ယူမှုကိုအပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပေါ် မူတည်၍ မဟုတ်ပါကပြောင်းလဲထားသောအပင်များတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ် striated ကြွက်သားကျုံ့ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုဝယ်ယူရန်ပုံစံတစ်မျိုးအဖြစ်သဘောပေါက်နားလည်စေသည်။ ထို့ကြောင့် Pavlovian ဆုချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက်သည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်က Pavlov မှတင်ပြခဲ့သောအယူအဆ၏အရေးပါသောတိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုး (မျှော်မှန်းထားသည့်တန်ဖိုး) သာမကအနာဂတ်ဆုလာဘ်များ၏စွန့်စားမှု (ကှဲလှဲခြင်း) အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသည်။ ခန့်မှန်းချက်အမှားများ၏အရေးပါမှုသည် Kamin ၏ပိတ်ဆို့ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်လေ့လာခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းခြင်းသည်အားဖြည့်ခြင်းသည်ခန့်မှန်းထားသည်ထက်ပိုကောင်းသည် (သို့) ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အဆင့်အထိသာတိုးတက်ကြောင်းပြသသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအားဖြည့်ခြင်း၏တန်ဖိုးကိုအတင်းအကျပ်ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှသင်ယူခြင်းသည်တဖြည်းဖြည်းနှေးကွေးသည်။
ဧည့်ခံဆုချမှ Dopamine တုံ့ပြန်မှု
midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလ်အများစု (၇၅-၈၀%) သည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲပုံမှန်အားဖြင့် <75 ms နှင့်ကြာချိန်နှင့် <80 ms ကြာချိန်၏ကြာချိန်များနှင့်အတူပုံမှန်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသသည် (ပုံ (ပုံ ၁ အေ) .100A) ။ ဤသည်ပေါကျကှဲတုံ့ပြန်မှု dopamine အာရုံခံအပေါ်တည်ရှိ glutamatergic NMDA နှင့် AMPA receptors ၏ activation နှင့်ပလပ်စတစ်ပေါ်တွင်မူတည် [200-1] ။ အစားအစာသို့မဟုတ်ကိုကင်းအကျိုးကျေးဇူးအတွက်နှင့် T-Maze ရွေးချယ်မှုများကဲ့သို့သောအစာစားချင်စိတ်များကိုအပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။
dopamine အာရုံခံ၏ neurophysiological ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လှုပ်ရှားမှု၏ Phasic activations ။ A: မူလဆုလာဘ်များအပြီး Phasic activation ။ B:: အောက်ပါ Phasic activation ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်ဆုချ။ C: Top: မူလတန်းပြီးနောက် phasic activation မရှိခြင်း (ဆက်လက်…)
ဖြန့်ဝေဆုချဖို့ dopamine တုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးခန့်မှန်းအမှား code ပုံ, ခန့်မှန်းသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုလာဘ်တစ်ခု activation (အပြုသဘောခန့်မှန်းအမှား) elicits တစ်ဦးအပြည့်အဝခန့်မှန်းဆုလာဘ်အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ဆွဲယူနှင့်ခန့်မှန်းသည်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားကြောင်းအကျိုးကိုတစ်ဦးစိတ်ကျရောဂါ (အနုတ်လက္ခဏာအမှား) [13-24] ဖြစ်ပေါ်သည်။ အရှင် dopamine တုံ့ပြန်မှုအပြည့်အဝ Rescorla-Wagner သင်ယူမှုမော်ဒယ်များ၏အရေးပါသက်တမ်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသောနှင့် [6,23] နီးကပ်စွာအကျိုးရှိစွာယာယီခြားနားချက်အားဖြည့်သင်ယူမှုမော်ဒယ်များအားသင်ကြား signal ကိုပုံနဲ့ဆင်တူတယ်။
အဆိုပါအမှားတုန့်ပြန်သည့်လက်ခံရရှိဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်မျှော်မှန်းဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို [18-23] အကြားခြားနားချက်နှင့်အတူ quantitative ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်အမှားတုန့်ပြန်အကျိုးကို၏အချိန်မှအထိခိုက်မခံလျက်ရှိ၏ တစ်ဦးနှောင့်နှေးဆုလာဘ် [24,25] မူရင်းအချိန်မှာစိတ်ကျရောဂါနှင့်၎င်း၏အသစ်သောအချိန်တွင်တစ်ဦးကို Activation ဖြစ်ပေါ်သည်။ အဆိုပါအရေအတွက်အမှားနိုင်တဲ့ coding အပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားများကိုထင်ဟပ် Active ဘို့ထငျရှားပါသညျ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်အနုတ်ခန့်မှန်းအမှားများနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်နေသည့်စိတ်ကျရောဂါအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုသုညအောကျတှငျမကျနိုင်သကဲ့သို့, သဘာဝကျကျတစ်ဦးကျဉ်း dynamic range ကိုပြသထားတယ်နှင့်သင့်လျော်သောအရေအတွက်အကဲဖြတ်  အကောင့်သို့စိတ်ကျရောဂါ၏အပြည့်အဝကာလယူလိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့် dopamine အာရုံခံသာခန့်မှန်းခြင်းမှမတူသောအတိုင်းအတာအထိဆုချတုံ့ပြန်ကြသည်။ ခန့်မှန်းယခင်ကကြုံတွေ့ဆုလာဘ်ကနေအစပြုသကဲ့သို့, dopamine အာရုံခံလက်ရှိဆုလာဘ်ယခင်ဆုလာဘ်ထက် သာ. ကောင်း၏တဲ့အခါမှသာ activated နေကြသည်။ နောက်တဖန်ကျော်အတူတူပင်ဆုလာဘ် dopamine အာရုံခံကိုသက်ဝင်မည်မဟုတ်။ dopamine အာရုံခံ၏ activation အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးအပြုသဘောအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် အကယ်. သာတိုးမြှင့်ဆုလာဘ် dopaminergic ယန္တရားများမှတဆင့်ဆက်လက်အားဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်။ ဤသည်စဉ်ဆက်မပြတ်, မပြောင်းလဲသောဆုလာဘ်ဟာသူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်ဖို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆုံးရှုံးဖို့ပုံရသည်, ဘာကွောငျ့လဲကျွန်တော်အမြဲပိုပြီးဆုလာဘ်လိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်သင်ယူမှုသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများများအတွက်တရားဝင် Paradigm တီထွင်ခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုစမ်းသပ်  ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအပြည့်အဝခန့်မှန်းဆုလာဘ်နှင့်အတူတွဲသောလှုံ့ဆော်မှုသင်ယူရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဤသို့ခိုင်လုံသောဆုလာဘ်ခန့်မှန်းဖြစ်လာမထားဘူး။ အဆိုပါပိတ်ဆို့လှုံ့ဆော်မှုအောက်ပါအကျိုးကို၏မရှိခြင်းတစ်ဦးခန့်မှန်းအမှားဖွဲ့စည်းမပင်  ချိတ်တွဲကျယ်ပြန့်နှိုးဆွ-ဆုလာဘ်ပြီးနောက်, dopamine အာရုံခံအတွက်တုန့်ပြန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပေးပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုပိတ်ဆို့ထားနှိုးဆွပြီးဆုလာဘ်များဖြန့်ဝေနေတဲ့အပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားပါဝငျနှင့်အညီတစ်ဦး dopamine activation elicits ။
အဆိုပါအေးစက်တားစီးပါရာဒိုင်း  ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများများအတွက်အပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်များတွင်အလုပ်တာဝန်များတွင်စမ်းသပ်လှုံ့ဆော်မှုလှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းထားတဲ့ထူထောင်ဆုလာဘ်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဆုလာဘ်ဝင်းပြီးနောက်ပေးထားသည်စမ်းသပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်၏မရှိခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်းပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအေးစက် inhibitor အပြီးဆုလာဘ်ပျက်ကွက်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အညီ dopamine အာရုံခံ  အတွက်စိတ်ကျရောဂါသွေးဆောင်သော်လည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အ inhibitor ပြီးနောက်ဆုလာဘ်များဖြန့်ဝေနေတဲ့ခိုင်မာတဲ့အပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားနှင့်အညီတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ dopamine activation ထုတ်လုပ်သည်။
အဲဒီနှစျခုတရားဝင်စမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်တွေကို dopamine အာရုံခံဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား bidirectional နိုင်တဲ့ coding ပြသသောအတည်ပြုပါ။
အထွေထွေသဘောမျိုးများတွင်လှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းအကျိုးကိုဆုလာဘ်တန်ဖိုးများများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဖြူးအကြောင်းကိုအသိပေးနေဖြင့်အနာဂတ်ဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက် (ပထမအခိုက်) နှင့် (မျှော်မှန်း) ကှဲလှဲ (ဒုတိယအခိုက်) သို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးစံသွေဖည်ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ dopamine တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်သည့်လှုံ့ဆော်မှုပြီးနောက်နှစ်ဦးကိုစက္ကန့်မှာဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်ဖြန့်ဖြူး၏ပထမနှင့်ဒုတိယအချိန်လေးနှစ်ဦးစလုံးမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်လှုံ့ဆော်မှုကွဲပြားခြားနားသောမျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးများနှင့်အကှဲလှဲအတူ equiprobable ဆုလာဘ်ပြင်းအား၏တိကျသော binary ဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဝေဟောကိန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်အမှားတုန့်ပြန်သည့်ရရှိသောနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအကြားခြားနားချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သကဲ့သို့, လက်ခံရရှိဆုလာဘ်များတူညီပြင်းအား  အသီးသီးသောဆုလာဘ်သည်၎င်း၏ခန့်မှန်းသည်ထက်ပိုမိုကြီးမားသို့မဟုတ်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေပေါ် မူတည်. dopamine လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်စေထုတ်လုပ်သည်။ ဤရလဒ်တန်ဖိုးကခန့်မှန်းအမှားနိုင်တဲ့ coding တစ်ဦးကိုကိုးကားသို့မဟုတ်ကျောက်ဆူးတန်ဖိုးဆွေမျိုးသတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းအမှား၏ dopamine နိုင်တဲ့ coding ကတော့ကှဲလှဲဒါမှမဟုတ်ဖြန့်ဖြူးစံသွေဖည်ဖို့ adapts ။ 10  ကရရှိသောဆုလာဘ်ပြင်းအား (နှင့်ရလဒ်တန်ဖိုးကခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ) အကြားကွဲပြားခြားနားမှုခေါက်ရှိနေသော်လည်း equiprobable ဆုလာဘ်တစ်ခု binary ဖြန့်ဖြူးခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီဖြန့်ဖြူးအတွင်းပိုကြီးတဲ့ပြင်းအားတွေနဲ့ဆုလာဘ်များဖြန့်ဝေ, ဦးချင်းစီဖြန့်ဝေအားဖြင့်ထိုအတူ dopamine activation elicits ။ numerical တွက်ချက်မှုဟာ dopamine တုံ့ပြန်မှု codes တွေကိုပုဟောကိန်းထုတ်ဖြန့်ဖြူး၏စံသွေဖည် ချ. ဝေဖန်တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းအမှားတစ်ခုကိုဖော်ပြပါ။ ဒါကရရှိသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုစံသွေဖည်၏ယူနစ်အတွက်မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်ထံမှမတူဘယ်လောက်ညွှန်း, စံသွေဖည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်၏ထိရောက်သောပုံမှန်သို့မဟုတ်အကြေးတို့၌ပမာဏ။ သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားကှဲလှဲသို့မဟုတ် Standard သှဖေထက်ယုတ်အားဖြင့်ပြခဲ့သည်ဆို၏ဖြစ်ကြောင်းအမှားသင်ကြားမှုအချက်ပြမှုများရလဒ်များ  ၏ဟောကိန်းထုတ်အန္တရာယ်မှခံနိုင်ရည်ကြောင်းတည်ငြိမ်သင်ယူမှုဖျန်ဖြေနိုင်သောအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မျက်စိ၊ အာရုံနှင့် somatosensory လှုံ့ဆော်မှုများကိုခန့်မှန်းသည့်အကျိုးကျေးဇူး (ပုံ (ပုံ ၁ ဘီ) ၁ ခ) [၃၁-၃၃] ပြီးနောက်ဒိုopamineအာရုံခံများသည်လှုပ်ရှားမှုများကို ('စိတ်လှုပ်ရှားမှု') ပြသည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုအာရုံခံပုံစံများနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏ Spatial အနေအထားနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလလက်မောင်း, ပါးစပ်သို့မဟုတ်မျက်စိလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခြင်း effectors ၏ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
တက်ကြွစွာ  ဤကဲ့သို့သောအရည်အသံအတိုးအကျယ်အဖြစ်, ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ  နှင့်ဆုလာဘ်ပြင်းအားနှင့်အတူ monotonically တိုးမြှင့်။ သို့သော် dopamine တုံ့ပြန်မှုနေသမျှကာလပတ်လုံးမျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးတစ်ခု  တူညီဖြစ်သကဲ့သို့ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ပြင်းအားအကြားခွဲခြားမရကြဘူး။ အရှင် Active ဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဝေ၏မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက် code မှပေါ်လာပါသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးကပို parsimonious ရှင်းပြချက်သည်နှင့်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆူညံသံမည်ဟုမျှော်လင့် (ပုဂ္ဂလဒိဋ္) utility ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးစရိုက်လက္ခဏာတွေကာကွယ်ပေးသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ယာယီလျှော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္နိုင်တဲ့ coding ထုတ်ဖော်ပြသနှင့်ပြဿနာအပေါ်အချို့သောအလင်းပေးအံ့သောငှါသတိပြုပါ။
အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအချိန်လျော့နည်းလာခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုပမာဏသည် dopamine တုန့်ပြန်မှုသည်တိရစ္ဆာန်၏လှုံ့ဆော်မှုကိုအထိခိုက်မခံကြောင်းညွှန်ပြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးများသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးမှုများအကြားရွေးချယ်မှုများတွင်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်မှု၏တင်ပြချက်မှ dopamine တုံ့ပြန်မှုတိရစ္ဆာန်၏အနာဂတ်ရွေးချယ်ထားသောဆုလာဘ်  သို့မဟုတ်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရွေးချယ်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှဆုလာဘ်ကိုထင်ဟပ်။ 
သင်ယူမှု၏သင်တန်းကာလအတွင်းအကျိုးကိုဖို့ dopamine activation အဆက်ဆက်သင်ယူမှုစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းလျော့ကျနှင့်အကျိုးကိုခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု activation [36,37] တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ တုံ့ပြန် conditional များ၏ဝယ်ယူ predicton အမှားအယွင်းများ conditional လှုံ့ဆော်မှု  မှ dopamine တုံ့ပြန်မှုများ၏ဝယ်ယူအတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းညွှန်ပြ, ပိတ်ဆို့ခြင်းမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုဆုချဖို့တုန့်ပြန်လွှဲပြောင်း  အကျိုးရှိစွာယာယီခြားနားချက်အားဖြည့်မော်ဒယ်၏သင်ကြားမှုအချက်ပြမှုများ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးဝိသေသလက္ခဏာများကိုလိုက်နာရမည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုပြောင်းကုန်ပြီ [27,38] အစောပိုင်းကယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်များများ၏လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်ကြားကာလကိုဖြတ်ပြီးခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ၏ backpropagation ပါဝင်ပါဘူးဒါပေမယ့်မူရင်းယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်နှင့်မူရင်းနှင့်ပိုပြီးမကြာသေးခင်ကယာယီခြားနားချက် Implementation ကို [6,37,39] အကြောင်းပြောရင်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးခယျြမှုဦးစားပေးသဖြင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတိုင်းတာခြင်းသူတို့နှောင့်နှေးကြသောအခါဆုလာဘ်ဟာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုအချို့ကိုဆုံးရှုံးကြောင်းဖော်ပြသည်။ တကယ်တော့, ကြွက်, ခို, မျောက်နှင့်လူသားမကြာခဏနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုကြီးမားဆုလာဘ် [40-42] ကျော်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သေးငယ်ဆုလာဘ်ကြိုက်တတ်တဲ့။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုးကိုပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်သော်လည်း, အချိန်နှောင့်နှေးတိုးမြှင့်ခြင်း, အရှင်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးလာပြီးပုံ, အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်နောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအကြား intertemporal အပြုအမူရွေးချယ်မှု၏ Psychometric အစီအမံ p = 0.5 နှင့်အတူ option တခုစီကိုရှေးခယျြ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်သတ်မှတ်ရွေးချယ်မှုလျစ်လျူ၏ဖြစ်ပျက်မှုသည်အထိအစောပိုင်းဆုလာဘ်၏ပြင်းအားကိုချိန်ညှိ။ ထို့ကြောင့်ရှေးခယျြမှုလျစ်လျူမှာအနိမ့်အစောပိုင်းဆုလာဘ်နောက်ပိုင်းဆုလာဘ်တစ်ခုအောက်ပိုင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုးကိုဖော်ပြသည်။ မျောက်ပေါ်မှာငါတို့မကြာသေးမီစမ်းသပ်မှုများတွင် 4, 8 နှင့် 16 s မှနှောင့်နှေးဆုလာဘ်အဘို့ရှေးခယျြမှုလျစ်လျူတန်ဖိုးများ 25 s ကို  ပြီးနောက်အကျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်အသီးသီးခန့် 75%, 2% နှင့် 43% အားဖြင့် monotonically လျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါကျဆင်းခြင်းတစ်ခြဲ့ကားပွောလျှော့ function ကို fit ။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုဆုချဖို့ dopamine တုံ့ပြန်မှုချင်းစီနှောင့်နှေးပြီးနောက်ကိုအပ်ခံရဆုလာဘ်၏တူညီသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေပမာဏရှိနေသော်လည်း2s ကို  မှ 25,43 ၏ဆုလာဘ်နှောင့်နှေးဖြတ်ပြီး monotonically လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုယာယီနှောင့်နှေးသူတို့ intertemporal ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်အကဲဖြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုထိခိုက်စေအဖြစ် dopamine တုံ့ပြန်မှုအလားတူထုံးစံ၌လှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းဆုချမှထိခိုက်စေသည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာဆုလာဘ်နှောင့်နှေးနှင့်အတူ dopamine တုံ့ပြန်မှုများကျဆင်းခြင်းနိမ့်ဆုလာဘ်ပြင်းအားနှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုကျဆင်းခြင်းကနေ indistiguishable ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတူယာယီနှောင့်နှေးဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲမှုများမှတဆင့် dopamine တုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သူတို့သေးငယ်ဖြစ်လျှင်အဖြစ်ထို့ကြောင့် dopamine အာရုံခံအဘို့, နှောင့်နှေးဆုလာဘ်ပေါ်လာပါသည်။
ထို့ကြောင့် dopamine အာရုံခံမဟုတ်ဘဲနှောင့်နှေးဆုလာဘ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ရည်မှန်းချက်တန်ဖိုးကိုထက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ code ပုံရသည်။ utility ကိုမဟုတ်ဘဲဆုလာဘ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတန်ဖိုးကိုထက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္များအတွက်တိုင်းတာကြောင်းပေးထား, ယာယီလျှော့အတူတုံ့ပြန်မှုကျဆင်းခြင်း (ပုဂ္ဂလဒိဋ္) utility ကိုထက် (ရည်မှန်းချက်) တန်ဖိုးကိုသကဲ့သို့ကြောင်း dopamine အာရုံခံကုဒ်ဆုလာဘ်အကြံပြုပေလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်ပိုပြီးတိုက်ရိုက် utility ကိုနိုင်တဲ့ coding စမ်းသပ်ဖို့ကူညီပေလိမ့်မည်။
ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှ Dopamine တုံ့ပြန်မှု
နိုးနေသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်လေပြွန်များ၊ hypertonic saline နှင့်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်တို့ကဲ့သို့သောဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုသည်နိုးနေသောတိရိစ္ဆာန်များတွင် dopamine အာရုံခံ၏သေးငယ်သည့်အချိုး (activate ('excitatory) တုန့်ပြန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (14% ; 18-29% ; 23% ) ; 11% ), နှင့် dopamine အာရုံခံအများစုသည်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (သို့) ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရပ်များ (ပုံ (Figure1C1C top)) ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်မတူဘဲလေထုအလွှာများသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အမှားတုန့်ပြန်မှုများအားထုတ်လွှတ်ရန်ပျက်ကွက်သည်။ ; ခန့်မှန်းသာဆန့်ကျင်ဘက် activations modulates [45,46] ။
(; 50% ; 18% ; 17%  14% ) နှင့်မကြာခဏလှုပ်ရှားမှု၏စိတ်ကျထုံဆေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆန္ဒရှိဆွကွဲပြားပေမယ့်အများအားဖြင့်နှေးကွေး၏မကြာခဏအနိမ့်ဒီဂရီ, တုံ့ပြန်မှုကိုသက်ဝင်ထုတ်လုပ်သည်။ dopamine အာရုံခံ၏ပိုကောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတူ Neurophysiological reinvestigations  ထုံဆေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆန္ဒရှိ dopamine Active ၏အလုံးစုံအနိမ့်ဖြစ်ပွားမှုကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိ  က midbrain ၏ ventromedial tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံတုံ့ပြန်တည်ရှိသည်။
အေးစက်, နိုးမျောက်တွေကိုလေကြောင်း puff ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှု dopamine အာရုံခံ၏လူနည်းစုအတွက် Active ထုတ်ယူနှင့် dopamine အာရုံခံ၏ပိုကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်စိတ်ကျ (11% ; 13% ; 37% ) ။ စီးပွားပျက်ကပ်တုံ့ပြန်မှု (အနက်ရောင်, ပုံ Figure33C1C အောက်ခြေကိုကြည့်ပါ) ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု  မှ dopamine အာရုံခံ၏ပျမ်းမျှလူဦးရေတုံ့ပြန်မှုအတွက်အနည်းငယ် Active ထွက် cancel ။ တစ်ဦးသောအခြေအနေများလှုံ့ဆော်မှုထိုကဲ့သို့သောလေကြောင်း puff အဖြစ်ကခန့်မှန်းထားသည်မူလတန်းဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်ထက်လျော့နည်းခြင်းကိုမနှစ်သက်သော်လည်းတဦးတည်းလေ့လာမှုမှာအေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှု, (37% vs. 11% ) သည်လေထု puff သူ့ဟာသူထက်ပိုပြီးအာရုံခံ activated ။ လေထု puff နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါအေးစက်နှိုးဆွဖို့ Active ၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကဆန္ဒရှိနှင့် activation (ထို activation နည်းမကြာခဏယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပိုမိုဆန္ဒရှိ) သို့မဟုတ် activated ၏အချိုးအစားကိုတိုးမြှင့်များအတွက်တာဝန်ရှိတစ်ဦးအပိုဆောင်း, Non-ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအစိတ်အပိုင်းအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြု % 11 မှ 37% ကနေအာရုံခံ။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွတက်ကြွလူဦးရေအတွက်လေကြောင်း puff ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းသော်လည်း, သူတို့သည်တစ်ဦးချင်းစီတွင် neuron  အတွက်အကဲဖြတ်မခံခဲ့ရပါ။ တစ်ဦးကလူဦးရေဆက်စပ်မှုကြောင့်လူဦးရေအတွင်းအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းအာရုံခံတစ်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုကနေပျေါပေါကျစေခြင်းငှါ, အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိနှိုးဆွတက်ကြွ 11% ထက် 37% ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထိုအတူအာရုံခံနည်းလမ်း (ပုံ (Figure1C1C အောက်ဆုံးမီးခိုးရောင်) (65% ) ၏ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကျပန်း Alternative အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်သည့်အခါအခြားလေ့လာမှု၌, dopamine အာရုံခံ၏ကြီးမားသောအချိုးအစားအေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှုမှ phasic Active ပြသ၏လှုပ်ရှားမှုများ conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏နှစ်မျိုးကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံပုံစံများ (ပုံ (Figure1C1C အောက်ခြေအနက်ရောင်) (11%) ရှိခဲ့သည့်အခါအများကြီးလျော့နည်းမကြာခဏ။ အဆိုပါနောကျအခနျးဖြစ်နိုင်သည်ဆန္ဒရှိနှင့်အခြား, unrewarded လှုံ့ဆော်မှုဤ unexplained active အခြေခံအချက်များကိုဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်ခဲ့ကြသည်။
အချို့သော dopamine အာရုံခံဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအားဖြင့် activated နေကြသည်သော်လည်း, အကြီးဆုံး dopamine activation ဆုချနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအမှုနည်းလမ်းများနှင့်အတူရရှိသောဒေတာများအလားတူကောက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ကြွက်ပြုမူအတွက်အစာရှောင်ခြင်းစကင် voltammetry dopamine အာရုံခံ၏ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မှု striatal varicosities ထံမှသက်ဆိုင်ရာ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းအကြံပြုဆုလာဘ်များနှင့်အေးစက်ပြီးနောက်လှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းဆုချမယ့်ပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်  ပြသထားတယ်။ အဆိုပါ dopamine တိုးသာစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာနှင့်, အရှင် electrophysiological activation အနီးဆုံးအားလုံး neurochemical နည်းလမ်းများ၏အတိုဆုံးအချိန်သင်တန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ dopamine လွှတ်ပေးရန်  အကျိုးသည် differential ကို (sucrose) ဖြစ်ပါသည်နှင့်ပြစ်ဒဏ် (ကွီနိုင်) နဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ပျက်ကွက်။ voltammetry dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဒေသဆိုင်ရာပျမ်းမျှအကဲဖြတ်ထားပါသည်အမျှကွီနိုင်နှင့်အတူတိုင်းတာလွှတ်ရာမရှိခြင်း dopamine လူဦးရေတုံ့ပြန်မှု  အတွက်စိတ်ကျအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းအနည်းငယ် Active ဖုံးကွယ်ပေလိမ့်မည်။ Vivo microdialysis အတွက်အလွန်အထိခိုက်မခံသုံးပြီးလေ့လာရေးဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု  အောက်ပါ dopamine လွှတ်ပေးရန် detect ။
microdialysis တိုင်းတာ၏အချိန်သင်တန်း 300-500 ကြိမ် ပတ်သက်. ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မှုထက်ပိုနှေးသည်နှင့် presynaptic interaction က dopamine လွှတ်ပေးရန်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်ခွင့်ပြုဘို့လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်ဤသည်တုံ့ပြန်မှု,  ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated အနည်းငယ်အာရုံခံခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်တစ် dopamine ပြောင်းလဲမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ ။ dopamine အာရုံခံ၏ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်၏နှောင့်အယှက်များစွာကိုအစာစားချင်စိတ်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကို disrupts ဒါပေမယ့်လည်းအေးစက်  စိုးရိမ်နေကြသည်။ အောက်ပိုင်း dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု၏ unspecific, ယေဘုယျအားဖြင့်ကို disable အကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခံရဖို့ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သော, ထွက်အုပ်ချုပ်ပြုလုပ်လျှင်ရလဒ်ဆန္ဒရှိ dopamine တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု learning function ကိုအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇဖြည့်စွက် channelrhodopsin မှတဆင့် optogenetic နည်းလမ်းများအားဖြင့် dopamine အာရုံခံ၏တိကျသောဆွ  ကြွက်တွေမှာ Pavlovian ရာအရပျ preference ကိုအေးစက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, dopamine ဆွ၏ပိုက်ကွန်ဆန္ဒရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်သည်အထင်မှားရာအရပ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းသင်ယူမှုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပေသည်။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များအစောပိုင်းကတွေ့ရှိရပါသည်ကနေဆင်းသက်လာ dopamine စနစ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြုသဘောအားဖြည့် function ကို၏အယူအဆ, လျှပ်စစ် Self-stimulation နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအလုပ် [1,2] အတည်ပြုပါ။ သို့သော်ဤငြင်းခုံကြောင်းဆုလာဘ် dopamine စနစ်များ၏တစ်ခုတည်းသော function ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်မဟုတ်သလိုအားလုံးဆုလာဘ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine အာရုံခံပါဝင်ကြောင်းမ postulate ။
ဆုလာဘ် coding မဟုတ် Phasic dopamine Active
လှုံ့ဆော်မှုများသည်ကာယရေးအရအရေးကြီးသည် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကကျသည်) သို့မဟုတ်အားဖြည့်ဆေးများ ('စိတ်ခွန်အားနိုးမှု' သို့မဟုတ် 'အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အရာ') နှင့်ဆက်စပ်သောအခါသတိပေးမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများကိုအပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများသည်လှုံ့ဆော်မှု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုနှင့်အားဖြည့်များ၏တန်ဖိုးတို့ဖြင့်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုသည်အားဖြည့်ခြင်းအပေါ်လုံး ၀ မမှီခိုပါ။ စိတ်အားတက်ကြွစေမှုသည်အားဖြည့်များ၏ခိုင်ခံ့မှု (ဆုနှင့်ပြစ်ဒဏ်) ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်သောအမြင်အာရုံနှင့်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု dopamine အာရုံခံအတွက် Active (ပုံ (Figure1D) .1D) သွေးဆောင်။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်း [58-60] ခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ပေမယ့်လှုံ့ဆော်မှုပေးလပေါင်းများစွာများအတွက်အောက်ပိုင်းအဆင့်မှာဆက်လက်ရှိနေကြသည်လုံလုံလောက်လောက်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြင်းထန်သောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုဟာလှုံ့ဆော်မှု ( တွင်ပုံ 15) ၏အရွယ်အစားအရသိရသည်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ salience လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသိသိသာသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်မှု  နှင့်အတူမူလတန်းအပြစ်ပေးဖို့တုံ့ပြန်မှုကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု inducing အာရုံစိုက်မှုများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ salience နှင့်ဆက်စပ်သော dopamine တုံ့ပြန်မှု၏သီးခြားအမျိုးအစားဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြင်းထန်သောနှင့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြုသဘောလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အားဖြည့် attribute တွေနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
တက်ကြွစွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မဆိုအာရုံစူးစိုက်မှုအားဖြင့် activated ခံရဖို့ dopamine အာရုံခံ၏အထွေထွေသဘောထားကိုထင်ဟပ်ဖို့မထင်ကြဘူးပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်ပျက်ကွက်အဖြစ်အထူးသဖြင့်အခြားအားကောင်းတဲ့အာရုံကိုထုတ်လုပ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်, အေးစက် inhibitors နဲ့ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု [14,29] အများစုစိတ်ကျခဲစစ်မှန်သော dopamine Active သွေးဆောင်။ ထို့ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းအဓိကလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် dopamine activation အထွေထွေသတိပေးနခွေငျးတုန့်ပြန်ဖွဲ့စည်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှုအကျိုးကိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုး salience ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အာရုံကိုပြန်ပါလာမည်မဟုတ်စေခြင်းငှါသီးခြားတုံ့ပြန်မှုဖွဲ့စည်းဖွယ်ရှိသည်။
အခွားသော Non-ဆုလာဘ်နိုင်တဲ့ coding Active
အခွားသောလှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်တန်ဖိုးသိသာနိုင်တဲ့ coding မပါဘဲ dopamine အာရုံခံအတွက် Active သွေးဆောင်။ ဤရွေ့ကား Active ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုဆုချဖို့တုံ့ပြန်မှုထက်ပိုသေးခြင်းနှင့်တိုတောင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု unrewarded အခါမကြာခဏ (ပုံ (Figure1E1E) စိတ်ကျရောဂါအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။
Dopamine အာရုံခံဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှု [27,29,32] နှင့်အတူ Pseudorandom Alternative အတွက်တင်ပြကြသည်ထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုအောက်ပါ Active ကိုပြ။ Active ၏ဖြစ်ပွားမှုအဆိုပါအပြုအမူတာဝန်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ, ဆုခခြံလှုံ့ဆော်မှုများ၏အရေအတွက်အပေါ်မူတည်; Active သုံးလေးယောက်တာဝန်လှုံ့ဆော်မှုဆုခခြံအခါမကြာခဏများမှာ (25% -63% ) နှင့်လေးတာဝန်လှုံ့ဆော်မှု၏တစ်ဦးတည်းသာ (1% ) unrewarded အခါရှားပါးဖြစ်လာသည်။ ဤသည်မှီခိုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသက်သက်သာအာရုံခံသဘောသဘာဝဆန့်ကျင်စောဒကတက်သည်။
Dopamine အာရုံခံကွဲပြားခြားနားသောနှောင့်နှေး  ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်သောဆုလာဘ်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲကျပုံစံကနဦး activation အစိတ်အပိုင်းကိုပြ။ ကနဦး activation ဆုလာဘ်နှောင့်နှေးနှင့်အတူအနည်းငယ်သာကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်အရှင်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို code မှမထင်ထားဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, နောက်ဆက်တွဲတုံ့ပြန်မှုအစိတ်အပိုင်းတိုးမြှင့်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အရှင် codes တွေကို (ပုဂ္ဂလဒိဋ္) ဆုလာဘ်တန်ဖိုး (အထက်ကြည့်ပါ) နှင့်အတူလျော့နည်းစေပါသည်။
Dopamine အာရုံခံဆုလာဘ်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကျပန်း Alternative အတွက်တင်ပြ conditional ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအောက်ပါမကြာခဏ Active ကိုပြသ; တက်ကြွစွာကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံပုံစံများကို non-ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအစိတ်အပိုင်းများနိုင်တဲ့ coding အကြံပြုခြင်း, (အာရုံခံ၏ 65% vs. 11% ) အသုံးပြုကြသည်အကြီးအကျယ်ရသောအခါပျောက်ကွယ်သွား။ ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်လုပ်ကွက်သို့ကွဲကွာနေကြတောင်မှအခါ, dopamine အာရုံခံသိသိသာသာ conditional ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated နေကြသည်။ သို့သော်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုပြီးမကြာခဏ Active ပိုမိုဆန္ဒရှိမူလတန်းလေကြောင်း puff နှိုင်းယှဉ် (37% vs. 11% ) ကိုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကို non-ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုအစိတ်အပိုင်းများ၏ဆန္ဒရှိဖို့ပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုထားသည်။
ဤမတူညီသော dopamine Active များအတွက်အကြောင်းပြချက် General, pseudoconditioning သို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှု salience ၌အိပျနိုငျတယျ။ ယေဘုယျအားလှုံ့ဆော်မှုများအကြားတူညီပေါ်ထွန်း။ ဆုလာဘ်နှင့်အတူဤအအခြားအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာဒါဟာ (ပုံ (Figure1E1E လက်ဝဲ) [27,29,32] နှင့်လှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းနှောင့်နှေးဆုချမှကနဦး, ညံ့ဖျင်း grade activation အစိတ်အပိုင်း (ပုံ unrewarded အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုဖို့အခြေအနေများ, အမည်ရသည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအရေအတွက် dopamine Active ရှင်းပြမယ် (Figure1E1E ညာဘက်)  ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံပုံစံများနှင့်လှုံ့ဆော်မှု (ပုံ (Figure1C1C အောက်ခြေ) အမြင်အာရုံဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်အာရုံစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူမြင်ကြသကဲ့သို့, တူညီသောပုံစံများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုထက် unrewarded လှုံ့ဆော်မှုမှလျော့နည်း dopamine active ထုတ်လုပ်သည့်အခါ  တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါ, ။
အဓိကစစ်ကူတစ် Contextual နောက်ခံသတ်မှတ်နှင့်ဤအခြေအနေတွင်  အတွင်းမည်သည့်ဖြစ်ရပ်များမှ unspecific အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပြောခြင်းငှါလာသောအခါ Pseudoconditioning ပေါ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ dopamine အာရုံခံဆုချရန်အလွန်အထိခိုက်မခံဖြစ်သကဲ့သို့, တစ်ကြိုးအခြေအနေတွင်ဤအခြေအနေတွင်နှင့်ဤအရပ်မှတစ်ဦးအာရုံခံ activation အတွက်သတ်မှတ်ထားလှုံ့ဆော်မှုမှ pseudoconditioning သွေးဆောင်ခြင်းငှါ, ။ ဤသည်ယန္တရားထိုသို့သောတိရစ္ဆာန်အမသက်ဆိုင်ဘဲမူလဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူသို့မဟုတ်သီးခြားစမ်းသပ်မှုလုပ်ကွက်  အတွက်ကျပန်း Alternative အတွက်ပေးအပ်ခံရသည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏နေ့စဉ်ဆုလာဘ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံထားတဲ့အတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ်ကြိုးအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ် Non-ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံခံ Active အခြေခံလိမ့်မည်။ Pseudoconditioning unrewarded ထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှု [27,29,32] ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု [33,45,46] နှင့်လှုံ့ဆော်မှု  ခန့်မှန်းနှောင့်နှေးဆုချမှကနဦး, ညံ့ဖျင်း grade activation အစိတ်အပိုင်းအောက်ပါအများဆုံးတက်ကြွစွာရှင်းပြပေမည်။ ထို့ကြောင့် pseudoconditioning မူလတန်းဆုလာဘ်ထက်တစ် conditional နှိုးဆွခြင်းမှထအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တစ်ဦးကြိုးအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမူလတန်းစစ်ကူနှစ်ဦးစလုံးမှ dopamine Active ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
သိသိသာသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ salience နှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှု (အထကျကိုကြည့်ပါ) [15,58-60] dopamine အာရုံခံမောင်းထုတ်ရန်ပုံပေါ်သော်လည်း, Non-ဆုလာဘ် coding dopamine Active သွေးဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုမကြာခဏကိုယ်ထိလက်ရောက်အလွန်အဓိကအသေးစားနှင့်မရှိကြပေ။ စိတ်ခွန်အားနိုး salience dopamine အာရုံခံ၏ 10-20% အတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်နှစ်ခုလုံးမှတက်ကြွစွာရှင်းပြမယ်ဆုလာဘ်များနှင့်အပြစ်ပေးဖို့ဘုံနှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုဆုချခြင်းနှင့် pseudoconditioning မှတဆင့်ပြစ်ဒဏ်၎င်းတို့၏နီးကပ်မှတဆင့် motivationally အဓိကဖြစ်လာလိမ့်မယ် non-အားဖြည့်။ သို့သော် dopamine Active ပြစ်ဒဏ်ထက်ဆုချဖို့ ပို. အထိခိုက်မခံဖြစ်ပုံရသည်။ စိတ်ခွန်အားနိုး salience နှစ်ဦးစလုံးစစ်ကူမှ sensitivity ကိုကပါဝင်ပတ်သက်သည်အတိုင်း, pseudoconditioning မှတဆင့်ဝယ်ယူစိတ်ခွန်အားနိုး salience ကောင်းစွာ dopamine Active coding non-ဆုလာဘ်ကိုရှင်းပြမပေးပေလိမ့်မည်။
အတူတူယူ, non-ဆုလာဘ် coding dopamine Active အများအပြား General သို့မဟုတျ, အထူးသဖြင့်, pseudoconditioning stimulus ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုအချက်များထဲကအအုပ်ချုပ်ကြသောအခါ unrewarded ထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုနှင့် dopamine အာရုံခံ၏ကန့်သတ်အချိုးအစားအတွက်မူလတန်းနှင့်အေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှုမှစစ်မှန်တဲ့ Active ဆက်လက်ရှိပုံရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးပါနှင့်လုံးဝဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအားလုံးဆက်စပ်ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များဖယ်ရှားပစ်သင့်ပါတယ်။
Non-ဆုလာဘ်နိုင်တဲ့ coding Active ၏ဖြစ်ပျက်မှုပေးထားပါကတစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်တစ် dopamine တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး unrewarded လှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ကြိုးခွဲခြားမယ်လို့မည်မျှမေးရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ အလွန်လျင်မြန်သောကနဦး, pseudoconditioned နှင့်ညံ့ဖျင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတုံ့ပြန်မှုအစိတ်အပိုင်းအလွန်လျင်မြန်စွာအလားအလာဆုလာဘ်  detect လုပ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ကူညီအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု default မြန်ဆန် faciliating များအတွက်ယာယီဆုကြေးငွေပေးပေလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ထိုချက်ချင်းအောက်ပါတုံ့ပြန်မှုအစိတ်အပိုင်းဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို  နှင့် unrewarded နှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု [27,29,32,33] (ပုံ (Figure1E) .1E) နဲ့သူ့ရဲ့မကြာခဏစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူ၎င်း၏အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော activation မှတဆင့်ထိုအဖြစ်အပျက်၏စစ်မှန်သောသဘာစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်။ ထို့ပြင် dopamine system ကိုဆုလာဘ် coding ကိုသာဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိ, ထိုကဲ့သို့သော orbitofrontal cortex, striatum နှင့် amygdala ကဲ့သို့သောအခြားအာရုံခံစနစ်များကိုအပိုဆောင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုငျသညျ။
အကျိုးကို signal ကိုဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဝေ၏စံသွေဖည်ခြင်းဖြင့်ပြခဲ့သည်ဆို၏ယုတ်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားထင်ဟပ်, ကြှနျုပျတို့အန္တရာယ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်စံသွေဖည်ရှုမြင်သည်မှန်လျှင်, အန္တရာယ်များအတွက်တိုက်ရိုက်အာရုံခံ signal ကိုရှိနိုင်မည်နည်းနေလျှင် ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ0ထံမှ 1 မှကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ပမာဏကို p = 0.5 (ပုံ (Figure2,2, inset) မှာ peaking တစ်ခု inverted ဦး function ကိုအောက်ပါအတိုင်းသော်လည်းအကျိုးကိုပြင်းအား, monotonically ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူယုတ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတိုးအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲအခါ။ p မှာ = 0.5, p = 0.5 အသီးသီးအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုပိုမိုသေချာသောစေနှင့်, အရှင်နိမ့်အန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေသော်လည်း, အကျိုးကိုလက်လွတ်ဖို့လည်းမရှိအဖြစ်ဆုလာဘ်ရရှိရန်အတိအကျအဖြစ်အများကြီးအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။
အန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်သောစဉ်ဆက်မပြတ် activation ။ အဆိုပါစွန့်စားမှုတုံ့ပြန်မှုဟာလှုံ့ဆော်မှု - ဆုလာဘ်ကြားကာလ (မြှား) ကာလအတွင်းလှုံ့ဆော်မှု (တြိဂံ) ဖို့ phasic, တန်ဖိုးကိုဆက်စပ် activation ကာလအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အပေါ်ဘက်ညာဘက်ရှိ inset သည်စွန့်စားရမှု (ordinate) အရကွဲပြားသည် (နောက်ထပ်…)
dopamine အာရုံခံ၏အကြောင်းသုံးပုံတစ်ပုံလှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းအကျိုးကိုနှင့်အကျိုးကိုအကြားကြားကာလအတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးပွါးကြောင်းအတော်လေးနှေးကွေး, အလယ်အလတ်, ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကို Activation ပြသ; ဒီတုံ့ပြန်ချက်ကို  (ပုံ (Figure2) 18) အန္တရာယ်နှင့်အတူ monotonically ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါ activation တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်မှုများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုခန့်မှန်းအကျိုးကိုမှဆုလာဘ်ကနေပြန်ဝါဒဖြန့်တစ်ဦးခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်ဖွဲ့စည်းမှမထင်ထားဘူး။ ကွဲပြားခြားနားသော equiprobable ၏ဒွိဖြန့်ဝေ, Non-သုညအကျိုးကိုခံရပြင်းအားအသုံးပြုသောအခါစံသွေဖည်သို့မဟုတ်ကှဲလှဲအတူ monotonically ကိုလည်း activation တိုး။ ထို့ကြောင့်စံသွေဖည်သို့မဟုတ်ကှဲလှဲ dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့် coded အဖြစ်စွန့်စားမှုအဘို့အလားအလာအစီအမံဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်သော Active လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ဖို့ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ် (1 s ကိုခန့်) ရှည် latency, နှေးကွေးအချိန်သင်တန်းများနှင့်အနိမ့်ထိပ်ရှိသည်။
၎င်း၏အနိမ့်ပြင်းအားရန်, အန္တရာယ်အချက်ပြဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို coding ပို phasic Active နှိုင်းယှဉ် dopamine varicosities မှာအနိမ့် dopamine လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်အန္တရာယ်အချက်ပြခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါအတော်လေးနိမ့် dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်အများစုဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ D2  receptors မရသော D63 receptors ကိုသက်ဝင်ပေလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, မြင့် phasic ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတုံ့ပြန်မှုခေတ္တမျှရန်လုံလောက်သောပိုပြီး dopamine ပြင်းအားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, မိမိတို့အများအားဖြင့်အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိ D1 receptors ကိုသက်ဝင်။ အရှင်နှစ်ခုအချက်ပြမှုများကို activated မတူညီသော dopamine receptors ၏အခြေခံပေါ်မှာ postsynaptic အာရုံခံအားဖြင့်မတူညီခံရပေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် dopamine တန်ဖိုးနှင့်အန္တရာယ်အချက်ပြအတူတကွအများအပြားပုံမှန်နှင့်လက်တွေ့အခြေအနေများတွင်လုံလောက်သော dopamine မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာနှစ်ဦးစလုံး D1 နှင့် D2 receptors နီးပါးတစ်ပြိုင်နက် activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးက dopamine အန္တရာယ်အချက်ပြမှုအများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ချက်ချင်းအကျိုးကို  ပြီးနောက်စံသွေဖည်နေဖြင့်ချက်ချင်းအောက်ပါခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်၏အတိုင်းအတာကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူး။ ဒုတိယအချက်ကချက်ချင်းအောက်ပါခန့်မှန်းအမှားတုန့်ပြန်နေဖြင့်သွေးဆောင်သည့် dopamine လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ဘူး။ စွန့်စားမှုအာရုံစိုက်မှု induces ကတည်းကအန္တရာယ်ကအလားအလာသင်ကြားမှု signal ကို၏တိုးမြှင့် The Associated သင်ယူမှုသီအိုရီ [64,65] အဆိုအရသင်ယူခြင်းအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။ တတိယအချက်က se နှုန်းဆုလာဘ်အန္တရာယ်များ၏အကဲဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု input ကိုပေးနိုင်ဘူး။ စတုတ္ထက  ဘဏ္ဍာရေးဆုံးဖြတ်ချက်သီအိုရီအတွက်ယုတ်-ကှဲလှဲချဉ်းကပ်သည်နှင့်အညီစွန့်စားမှုအထိခိုက်မခံတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မျှော်မှန်းထားသည် utility ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသတင်းအချက်အလက်ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့စီးပွားရေးမျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက် signal ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ဘူး။ သို့သော်အကြောင်းကို 1 ့ရဲ့အောင်းနေချိန်မသေချာမရေရာအောက်မှာရွေးချယ်မှုတစ်ခုချက်ချင်းအခန်းကဏ္ဍဖို့ signal ကိုများအတွက်ရှည်လွန်းနေသည်။
စာရေးဆရာ '' ပံ့ပိုးမှုများကို
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအော်စလို, နော်ဝေး, ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 အတွက် Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ရက်တွင်စာတမ်းဖတ်ပွဲ၏အခါသမယပေါ်မှာရေးထားတဲ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်, အ Wellcome Trust မှနေဖြင့်ဆွစ်အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း, လူ့ Frontiers သိပ္ပံအစီအစဉ်နှင့်အခြားထောက်ပံ့ကြေးများနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့အေဂျင်စီများထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Rompre PP ။ ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ အမ်းဗြာ Psychol ။ 1989; 40: 191-225 ။ Doi: 10.1146 / annurev.ps.40.020189.001203 ။
2 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1481-1489 ။ Doi ။ 10.1038 / nn1579 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
3 ။ Bernoulli ဃနမူနာ theoriae Nova က de mensura ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။ Comentarii ပညာရှင်များ Scientiarum Imperialis Petropolitanae (သတင်းစာများက IMP Acad သိပ္ပံစိန့်ပီတာစဘတ်။ ။ ။ ) 1738; 5: 175-192 ။ အန္တရာယ်၏တိုင်းတာခြင်းအပေါ်အသစ်တစ်ခုသီအိုရီ Exposition: အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော။ Econometrica 1954, 22: 23-36 ။
4 ။ Rao က RPN, Ballard DH ။ ယင်းအမြင်အာရုံ cortex အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကုဒ်: တချို့အပို-ဂန္ထဝင်လက်ခံ-Field သက်ရောက်မှုတစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့အနက်။ နတ် neuroscience ။ 1999; 2: 79-87 ။ Doi ။ 10.1038 / 4580 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
5 ။ Rescorla RA, Wagner AR ။ ခုနှစ်တွင်: Classical ကိုက် II ကို: လက်ရှိသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ Black က AH, Prokasy WF, အယ်ဒီတာ။ နယူးယောက်: Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု Crofts; 1972 ။ Pavlovian အေးစက်၏သီအိုရီ: အားဖြည့်ခြင်းနှင့် nonreinforcement ၏ထိရောက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာ; စစ။ 64-99 ။
6 ။ Sutton RS, Barto AG က။ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း: သပ္ပါယ်ကွန်ရက်ခေတ်မီသီအိုရီဆီသို့။ Psychol ဗျာ 1981; 88: 135-170 ။ Doi ။ 10.1037 / 0033-295X.88.2.135 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
7 ။ Kamin LJ ။ ခုနှစ်တွင်: တူရိယာဆိုင်ရာသင်ယူအတွက်အခြေခံကိစ္စများ။ Mackintosh NJ, Honig wk, အယ်ဒီတာ။ Halifax: Dalhousie တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း; 1969 ။ ရွေးချယ်အသင်းအဖွဲ့နှင့်အေးစက်; စစ။ 42-64 ။
8 ။ Blythe SN, Atherton JF, Bevan MD ။ dendritic AMPA နှင့် NMDA receptors ၏ Synaptic activation စသည်တို့အတွက် substantia nigra dopamine အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ်ယာယီ High-ကြိမ်နှုန်းကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ J ကို Neurophysiol ။ 2007; 97: 2837-2850 ။ Doi ။ 10.1152 / jn.01157.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
9 ။ Zweifel LS, က Parker JG, Lobb CJ, မိုးတစ်ဦးက, အမှတ်တရ VZ, Fadok JP, Darvas M ကကင်မ် MJ, Mizumori SJ, Paladini, CA, Phillips က Pem, Palmiter RD ။ dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့် NMDAR-မှီခိုပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်၏နှောင့်အယှက် phasic dopamine-မှီခိုအပြုအမူများရွေးချယ်အကဲဖြတ်ပေးစွမ်းသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ။ 2009; 106: 7281-7288 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0813415106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
10 ။ Harnett MT, Bernier BE, Ahn KC, Morikawa အိပ်ချ် Midbrain Dopamine အာရုံခံအတွက် NMDA receptor-mediated ဂီယာ၏ပလပ်စတစ်-အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ကျူးဧသောအသံကို။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 62: 826-838 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2009.05.011 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
11 ။ ဂျုံးစ်က S, Bonci အေ Synaptic plasticity နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း။ Curr Opin Pharmacol ။ 2005; 5: 20-25 ။ Doi ။ 10.1016 / j.coph.2004.08.011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
12 ။ Kauer ဂျာ Malenka RC ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007; 8: 844-858 ။ Doi ။ 10.1038 / nrn2234 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
13 ။ Ljungberg T က, Apicella P ကို, နှောင့်နှေး Alternative စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းမျောက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏ Schultz ဒဗလျူတုံ့ပြန်ချက်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 586: 337-341 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (91) 90816-E ကို။
14 ။ Schultz W က, Apicella P ကို, မျောက် dopamine အာရုံခံ၏ Ljungberg တီတုံ့ပြန်ချက်တခုနှောင့်နှေးတုန့်ပြန်တာဝန်သင်ယူခြင်း၏အဆက်ဆက်ခြေလှမ်းများစဉ်အတွင်းဆုချခြင်းနှင့်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုရန်။ J ကို neuroscience ။ 1993; 13: 900-913 [PubMed] ။
15 ။ Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol ။ 1998; 80: 1-27 [PubMed] ။
16 ။ Schultz W ကဒါယန်း P ကို, မွန်တဂူ RR ။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997; 275: 1593-1599 ။ Doi ။ 10.1126 / science.275.5306.1593 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
17 ။ Hollerman JR, Schultz ဒဗလျူ Dopamine အာရုံခံလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်၏ယာယီခန့်မှန်းမှာအမှားသတင်းပို့ပါ။ သဘာဝတရား neuroscience ။ 1998; 1: 304-309 ။ Doi ။ 10.1038 / 1124 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
18 ။ Fiorillo CD ကို, Tobler PN, dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်မသေချာမရေရာ၏ Schultz ဒဗလျူပြတ်နိုင်တဲ့ coding ။ သိပ္ပံ။ 2003; 299: 1898-1902 ။ Doi ။ 10.1126 / science.1077349 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
19 ။ Satoh T က, Nakai S က, Sato T က, Kimura အမ် dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရလဒ်ကို၏နိုင်တဲ့ coding ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 9913-9923 [PubMed] ။
20 ။ မောရစ်, G, Arkadir: D, Nevet တစ်ဦးက, Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ်တိုက်ဆိုင်မှုပေမယ် midbrain dopamine နဲ့ striatal ၏ကွဲပြားမက်ဆေ့ခ်ျလုပ်သူများတက်ကြွအာရုံခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 43: 133-143 ။ Doi ။ 10.1016 / j.neuron.2004.06.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
21 ။ Nakahara H ကို, Itoh H ကို, Kawagoe R ကို, Takikawa Y ကို, Hikosaka O. Dopamine အာရုံခံအခြေအနေတွင်-မှီခိုခန့်မှန်းအမှားကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 41: 269-280 ။ Doi: 10.1016 / S0896-6273 (03) 00869-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
22 ။ Bayer HM, Glimcher PW ။ Midbrain dopamine အာရုံခံတဲ့အရေအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား signal ကိုဝှက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 47: 129-141 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2005.05.020 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
23 ။ Tobler PN, Fiorillo CD ကို, dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုး Schultz ဒဗလျူအလိုက်နိုင်တဲ့ coding ။ သိပ္ပံ။ 2005; 307: 1642-1645 ။ Doi ။ 10.1126 / science.1105370 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
24 ။ Zaghloul Ka, Blanco ဂျာ Weidemann မှန် CT, မြို့ McGill K ကို Jaggi JL, Baltuch GH, Kahana MJ ။ လူ့ substantia nigra အာရုံခံမျှော်လင့်မထားတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ဝှက်။ သိပ္ပံ။ 2009; 323: 1496-1499 ။ Doi: 10.1126 / science.1167342 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
25 ။ Fiorillo CD ကို, Newsome WT, Schultz ဒဗလျူ dopamine အာရုံခံအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ယာယီတိ။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 966-973 ။ Doi: 10.1038 / nn.2159 ။
26 ။ Bayer HM, Lau B, Glimcher PW ။ dopamine အာရုံခံဆဲလျ၏စာရင်းအင်းများဟာနိုးမျောက်အတွက်ရထားနှုန်းကိုမြင့်တက်။ J ကို Neurophysiol ။ 2007; 98: 1428-1439 ။ Doi ။ 10.1152 / jn.01140.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
27 ။ Waelti P ကို, Dickinson တစ်ဦးက, Schultz ဒဗလျူ Dopamine တုံ့ပြန်မှုတရားဝင်သင်ယူမှုသီအိုရီ၏အခြေခံယူဆချက်ကိုလိုက်နာ။ သဘာဝ။ 2001; 412: 43-48 ။ Doi ။ 10.1038 / 35083500 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
28 ။ Rescorla RA ။ Pavlovian conditional တားစီး။ Psychol Bull ။ 1969; 72: 77-94 ။ Doi: 10.1037 / h0027760 ။
29 ။ Tobler PN, Dickinson တစ်ဦးကတစ်ဦး conditional တားစီးပါရာဒိုင်းအတွက် dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ခန့်မှန်းဆုလာဘ်ပျက်ကွက်၏ Schultz ဒဗလျူ Coding ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 10402-10410 [PubMed] ။
30 ။ Preuschoff, Bossaerts P. ဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏သီအိုရီမှခန့်မှန်းအန္တရာယ်ပေါင်းထည့်ခြင်း။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1104: 135-146 ။ Doi ။ 10.1196 / annals.1390.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
31 ။ Romo R ကို, ထိုမျောက် midbrain ၏ Schultz ဒဗလျူ Dopamine အာရုံခံ: Self-အစပျိုးလက်မောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းမှာတက်ကြွစွာတို့ထိရန်တုံ့ပြန်မှုများကဆက်ပြောပါတယ်။ J ကို Neurophysiol ။ 1990; 63: 592-606 [PubMed] ။
32 ။ Schultz W က, မျောက် midbrain ၏ Romo R. Dopamine အာရုံခံ: ချက်ချင်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲထုတ်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုများကဆက်ပြောပါတယ်။ J ကို Neurophysiol ။ 1990; 63: 607-624 [PubMed] ။
33 ။ Mirenowicz J ကို, Schultz ဒဗလျူအစာစားချင်စိတ်များက midbrain dopamine အာရုံခံ၏ဦးစားပေး activation ထက်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု။ သဘာဝ။ 1996; 379: 449-451 ။ Doi ။ 10.1038 / 379449a0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
34 ။ မောရစ်, G, Nevet တစ်ဦးက, Arkadir: D, Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ် Midbrain dopamine အာရုံခံအနာဂတ်အရေးယူဘို့ဆုံးဖြတ်ချက်များဝှက်။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 1057-1063 ။ Doi ။ 10.1038 / nn1743 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
35 ။ Roesch MR, Calu DJ သမား, Schoenbaum G. အ Dopamine အာရုံခံကွဲပြားခြားနားနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်သုံးနိုင်ဆုလာဘ်များအကြားဆုံးဖြတ်ခြင်းကြွက်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ option ကိုဝှက်။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1615-1624 ။ Doi: 10.1038 / nn2013 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
36 ။ Takikawa Y ကို, Kawagoe R ကို, Hikosaka O. အနေအထား-ဆုလာဘ် maping မှ saccades ၏ရေတိုနှင့်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေအတွက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Neurophysiol ။ 2004; 92: 2520-2529 ။ Doi ။ 10.1152 / jn.00238.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
37 ။ ပန် WX, Schmidt က R ကို, Wickens JR, Hyland BI ။ Dopamine ဆဲလ်ဂန္ထဝင်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်: အကျိုးကို-သင်ယူမှုကွန်ယက်တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းဘို့အထောကျအထား။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 6235-6242 ။ Doi ။ 10.1523 / JNEUROSCI.1478-05.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
38 ။ ဂူ PR စနစ်ဒါယန်း P ကို, Sejnowski တီဂျေ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Hebbian သင်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီး mesencephalic dopamine စနစ်များများအတွက်တစ်ဦးကမူဘောင်။ J ကို neuroscience ။ 1996; 16: 1936-1947 [PubMed] ။
39 ။ Suri R ကိုတစ်ဦး Spatial နှောင့်နှေးတုန့်ပြန်တာဝန်သိကြောင်း dopamine တူသောအားဖြည့် signal ကိုအတူ Schultz ဒဗလျူတစ်ဦးကအာရုံကြောကွန်ယက်ကို။ neuroscience ။ 1999; 91: 871-890 ။ Doi: 10.1016 / S0306-4522 (98) 00697-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
40 ။ Ainslie G. အ Specious ဆု: Impulse နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့အမူအကျင့်သီအိုရီ။ psyche Bull ။ 1975; 82: 463-496 ။ Doi: 10.1037 / h0076860 ။
41 ။ Rodriguez ML, Logue AW ။ အားဖြည့်ဖို့နှောင့်နှေးချိန်ညှိ: ခိုနှင့်လူသားတွေအတွက်ရွေးချယ်မှုနှိုင်းယှဉ်။ J ကို Exp Psychol Animation ပြုမူနေ Process ကို။ 1988; 14: 105-117 ။ Doi ။ 10.1037 / 0097-7403.14.1.105 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
42 ။ Richards JB, Mitchell က SH, က de ကျေး H ကို, Seiden LS ။ ညှိနှိုင်း-ငွေပမာဏကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်လျော့စျေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ပြဌာန်းခွင့်။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 1997; 67: 353-366 ။ Doi: 10.1901 / jeab.1997.67-353 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
43 ။ Kobayashi S က, dopamine အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ဆုလာဘ်နှောင့်နှေး၏ Schultz ဒဗလျူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7837-7846 ။ Doi ။ 10.1523 / JNEUROSCI.1600-08.2008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
44 ။ Guarraci အက်ဖ်အေ, Kapp BS ။ အဆိုပါနိုးယုန်အတွက် differential ကို pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic အာရုံခံတစ်ခု electrophysiological စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999; 99: 169-179 ။ Doi: 10.1016 / S0166-4328 (98) 00102-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
45 ။ ယောရှုသည် M က, Adler တစ်ဦးက, Mitelman R ကို, Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ် Midbrain dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့် striatal cholinergic interneurons ဆုလာဘ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဂန္ထဝင်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောယုဂ်မှာဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအကြားခြားနားချက်ဝှက်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 1673-11684 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3839-08.2008 ။
46 ။ Matsumoto က M, Hikosaka O. dopamine အာရုံခံဆဲလျနှစ်ယောက်အမျိုးအစားများကိုထူးခြားတဲ့အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများကိုဖျောပွ။ သဘာဝ။ 2009; 459: 837-841 ။ Doi: 10.1038 / nature08028 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
47 ။ Chiodo LA က, Antelman သည် SM, Caggiula AR, Lineberry CG ။ အဆိုပါ substantia nigra အတွက် DA ဆဲလ်နှစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးအစားများများအတွက်အထောက်အထား: အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု dopamine (DA) တွင် neuron များ၏ဥတုနှုန်းကိုပြောင်းလဲပစ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1980; 189: 544-549 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (80) 90366-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
48 ။ Mantz J ကို, Thierry လေး, mesocortical နှင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ဥတုမှုနှုန်းအပေါ် noxious အမြီးအဖြစ်တော့၏ Glowinski ဂျေ Effect: အ mesocortical စနစ်၏ရွေးချယ် activation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1989; 476: 377-381 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (89) 91263-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
49 ။ Schultz W က, အမေ့ဆေးမျောက်အတွက်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု somatosensory ဆွဖို့ nigrostriatal dopamine အာရုံခံ၏ Romo R. တုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol ။ 1987; 57: 201-217 [PubMed] ။
50 ။ Coizet V ကို, Dommett EJ, Redgrave P ကို, Overton PG ။ midbrain dopaminergic အာရုံခံ၏ Nociceptive တုံ့ပြန်မှုကြွက်များတွင်သာလွန် colliculus အားဖြင့် modulated နေကြသည်။ neuroscience ။ 2006; 139: 1479-1493 ။ Doi ။ 10.1016 / j.neuroscience.2006.01.030 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
51 ။ ဘရောင်းမယ်တော်ဆေးခန်း, Henny P ကို, Bolam JP, Magill PJ ။ ဦးနှောက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအလိုအလျောက်နဲ့မောင်းနှင်အပြောင်းအလဲများကိုစဉ်အတွင်း substantia nigra အတွက် neurochemically သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော dopaminergic အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 2915-2925 ။ Doi ။ 10.1523 / JNEUROSCI.4423-08.2009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
52 ။ Brischoux က F, Chakraboty, S, Brierley ပစ, Ungless MA ။ noxious လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral VTA အတွက် dopamine အာရုံခံ၏ Phasic စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2009; 106: 4894-4899 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0811507106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
53 ။ နေ့ JJ, Roitman MF, Wightman RM, Carelli RM ။ Associative သင်ယူမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆိုင်း mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1020-1028 ။ Doi ။ 10.1038 / nn1923 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
54 ။ Roitman MF, ဝီ RA, Wightman RM, Carelli RM ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် real-time ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုခွဲခြား။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 1376-1377 ။ Doi ။ 10.1038 / nn.2219 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
55 ။ လူငယ်တို့ AMJ ။ ခြွင်းချက်မရှိတုံ့ပြန်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအေးစက်: ကြွက်များတွင် microdialysis မိ 1 အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ။ J ကို neuroscience meth ။ 2004; 138: 57-63 ။ Doi: 10.1016 / j.jneumeth.2004.03.003 ။
56 ။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာ Schultz ဒဗလျူအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အမ်းဗြာ neuroscience ။ 2007; 30: 259-288 ။ Doi ။ 10.1146 / annurev.neuro.28.061604.135722 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
57 ။ Tsai HC, Zhang က F ကို, Adamantidis တစ်ဦးက, Stuber GD, Bonci တစ်ဦးက, က de Lecea L ကို, dopaminergic အာရုံခံအတွက် Deisseroth K. Phasic ပစ်ခတ်ရန်အမူအကျင့်အေးစက်များအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံ။ 2009; 324: 1080-1084 ။ Doi ။ 10.1126 / science.1168878 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
58 ။ Strecker RE, Jacobs BL ။ Substantia ကြောင်ပြုမူအတွက် nigra dopaminergic ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု: အလိုအလျောက်ဥတုနှင့်အာရုံခံ evoked လှုပ်ရှားမှုအပေါ် arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1985; 361: 339-350 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (85) 91304-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
59 ။ Ljungberg T က, Apicella P ကို, အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းမျောက် dopamine အာရုံခံ၏ Schultz ဒဗလျူတုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol ။ 1992; 67: 145-163 [PubMed] ။
60 ။ Horvitz JC, Stewart က T က, Jacobs BL ။ ventral tegmental dopamine အာရုံခံ၏ပြင်းစွာတိုက်လှုပ်ရှားမှုဟာနိုးကြောင်အတွက်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းနေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 759: 251-258 ။ Doi: 10.1016 / S0006-8993 (97) 00265-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
61 ။ Sheafor PJ ။ ယုန်၏ Pseudoconditioned မေးရိုးလှုပ်ရှားမှုများကို Contextual နောက်ခံတွေကိုမှအေးစက်အသင်းအဖွဲ့များရောင်ပြန်ဟပ်။ J ကို Exp Psychol: Animation ပြုမူနေ proc ။ 1975; 104: 245-260 ။ Doi: 10.1037 / 0097-7403.1.3.245 ။
62 ။ Kakade S ကဒါယန်း P. Dopamine: General နှင့်ဆုကြေးငွေ။ အာရုံကြော Netw ။ 2002; 15: 549-559 ။ Doi: 10.1016 / S0893-6080 (02) 00048-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
63 ။ Richfield ek, Pennney JB, Young က AB ။ ကြွက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors အကြားခန္ဓာဗေဒနှင့်ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်။ neuroscience ။ 1989; 30: 767-777 ။ Doi: 10.1016 / 0306-4522 (89) 90168-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref] ။
64 ။ Mackintosh NJ ။ အာရုံစူးစိုက်မှု၏တစ်ဦးကသီအိုရီ: အားဖြည့်နှင့်အတူစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏ Associates အတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာ။ Psychol ဗျာ 1975; 82: 276-298 ။ Doi: 10.1037 / h0076778 ။
65 ။ Pearce JM, Pavlovian အေးစက်များအတွက်ခန်းမ G. အဖြေမော်ဒယ်: ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု၏အခွအေနေပေမယ့်မထိရောက်မှုအတွက်များပါတယ်။ Psychol ဗျာ 1980; 87: 532-552 ။ Doi ။ 10.1037 / 0033-295X.87.6.532 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
66 ။ Levy H ကို, Markowitz HM ။ ယုတ်နှင့်ကှဲလှဲတဲ့ function ကိုတို့ကမျှော်လင့်ထားသည့် utility ကို approximating ။ နံနက် Econ ဗျာ 1979; 69: 308-317 ။